फाप्लामा एपीएफ च्याम्पियन
प्रदेश १ माथि बदला लिँदै नेपाल एपीएफ क्लबले प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता जितेको छ । एपीएफले आइतबार धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदानमा सम्पन्न फाइनलमा प्रदेश १ लाई ७ विकेटले पराजित गर्‍यो ।
फाप्ला क्रिकेट मैदानमा भइरहेको प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेटको उपाधिका लागि विभागीय टोली एपीएफ र प्रदेश १ बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । शनिबार सेमिफाइनलमा प्रदेश १ ले घरेलु टोली सुदूरपश्चिमलाई ९ विकेट र एपीएफले लुम्बिनी प्रदेशलाई ३८ रनले हराए ।
एपीएफ र सुदूरपश्चिमको यात्रा
फाप्ला क्रिकेट मैदानमा जारी प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेटमा सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ । सेमिफाइनलमा विभागीय टोली एपीएफले लुम्बिनी प्रदेश र घरेलु टोली सुदूरपश्चिमले प्रदेश १ सँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
एपीएफको सेमिफाइनल सुरक्षित
विभागीय टोली एपीएफ क्लब फाप्ला क्रिकेट मैदानमा जारी प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेटअन्तर्गत सुदूरपश्चिमलाई ८९ रनले हराएपछि सेमिफाइनल सुरक्षित गरेको छ । सुदूरपश्चिमलाई सेमिफाइनल पुग्न बिहीबार प्रदेश २ लाई हराउनुपर्नेछ ।
कर्णाली ६ रनमै अलआउट
फाप्ला क्रिकेट मैदानमा शनिबार सुरु प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेटमा प्रदेश १ र लुम्बिनी प्रदेश टिमले विजयी सुरुआत गरेका छन् । प्रदेश १ ले कर्णाली प्रदेशलाई १ सय ६० रनले पराजित गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट सुरु, उद्घाटन खेलमा प्रदेश १ विजयी
शनिबारदेखि धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदानमा प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिाता सुरु भएको छ । शनिबार उद्घाटन खेलमा प्रदेश नं. १ ले कर्णाली प्रदेशलाई १६० रनको फराकिलो अन्तरले हराएको छ ।
‘मुग्लानबाट बाँची फिर्नु नै ठूलो रैछ’
गाडीको पछिल्लो सिटमा बसेका थिए– तीन युवा । तिनका अनुहारमा गहिरो थकान र बाक्लो निराशाको रङ पोतिएको थियो । भारत हिमाञ्चल प्रदेशको एक लेकाली भेगको स्याउ बगानबाट घर फर्किरहेका थिए तिनीहरू । जाँदा लगाएको उही पुरानो कपडा र फाटेको झिटी–गुन्टाका साथ । तिनै युवाको एउटै पिरलो थियो– पसिना त बगाइयो, तर सुख भएन !
कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनअन्तर्गत शनिबार बिहान धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश अधिवेशनमा मतदान सुरु भएको छ । प्रदेश अधिवेशन आयोजक समितिको प्रचारप्रसार उपसमितिका संयोजक नृप सुनारका अनुसार जम्मा १७६ उम्मेदवार चयनका लागि मतदान भइरहेको छ ।
पूर्वनिर्धारित निर्वाचन कार्यतालिकामा ३ घण्टा ढिलो गरी नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको छ ।